5 nhau dzaKurume. Nhema nhema, nhoroondo, chinyorwa ... | Zvazvino Zvinyorwa
Tinosunungura Kurume uye kune akati wandei nhau dzekunyora semwedzi wega wega. Ndinosarudza uri 5, ayo ari matsva emazita akatsaurwa akadai Akanaka, Posteguillo o Cervantesuye kutanga ine pseudonym senge Greta alonso, uyo anopinda munzvimbo yekunyora aine nhoroondo yematsotsi. Uye pakupedzisira, isu tine bvunzo, naSarah Lacy, nekubata feminist nekusimbisa iyo chitarisiko amai. Ngatitarisei.
1 Uye Julia akadenha vamwari - Santiago Posteguillo
2 Denga remazuva ako - Greta Alonso
3 Kubva kuna mai vakadaro, kambani yakadaro - Sarah Lacy
4 Vhura moyo - Elvira Lindo
5 Iye mukomana ane reels - Pere Cervantes
Uye Julia akadenha vamwari - Santiago Posteguillo
Ukakunda iyo Planet Mubairo ne Ini, Julia, iwe uri mumwe we inonyanya kufarirwa uye kuverenga vanyori venhoroondo vanyori, vakabudirira ne matatu matatu yakagadzirirwa muRoma yekare, sei kusatevera saga? Uye ndozvinoitwa naSantiago Posteguillo, uyo anotora hunhu uye iye zvino anosangana naye nevavengi vane mafomu mazhinji. Fraticidal kurwa pakati pevana vavo vanotyisidzira kuenderera kwehumambo musimba. Uyezve pane iyo cáncer kuongororwa nachiremba wako Galen. Julia anogona kuzvipira munyatwa yakadaro, asi kana zvese zvikaita sekurasika, a yakasimba nyaya yerudo kuti zvese uye zvinogona kureva ruponeso, zvakare yehumambo.
Denga remazuva ako - Greta Alonso
Zvinoita sekudaro fashoni haina kubuda de kutanga mune nhema nhema ivo vanoshandisa mazita, nesarudzo yako wega kana yekushambadzira zano. Wekupedzisira ndiGreta Alonso, a Munyori weCantabrian akaberekwa mumakore makumi masere. Iyo yakatsaurirwa ku ouinjiniya, asi akanyora akati wandei nyaya, enganonyorwa pfupi uye nyaya. Uye ikozvino svetukira munoverengera neizvi kutanga.
Uye zvakare tine mukadzi anotungamirala muongorori Vapfuri, ndiani achabata nyaya yakare yakavharwa, iyo «Alicia kesi», iyo yakavhurwa pamberi pekuonekwa kwe miedzo mitsva. Saka kuferefeta kunomutora pakati peBilbao neMadrid kunotanga. Panguva imwecheteyo, tinotevera mumakwara e Inspector Brul, mukuru wako uye chipangamazano, uyo aive nehukama neakarohwa asati aurayiwa. Saka pamwe ndine zvinhu zvekuviga. Izvo tsvaga chokwadi, uye nemutengo wayo, zvinogona kutara zvese nekusingaperi.
Kubva kuna mai vakadaro, kambani yakadaro - Sarah Lacy
Sarah Lacy ndiye mutori wenhau, enterprising uyewo amai. Uye mune ino yekupedzisira chinyorwa anotsikisa inodzivirira kukosha kwevakadzi mune bhizinesi nyika, asi anoda kujekesa kunyanya aya evanaamai vanoshanda, vavanoona sevanoda chinzvimbo uye vanobudirira. Iye anozviita ne toni yakaoma asi zvakare inosetsa, uye yakatsaurirwa ku disassemble the clichés izvo zvakaratidza vakadzi vazhinji nekutenda kuti kana vakashanda, havazove vanaamai vakanaka. Hapana chimwe chinowedzera kubva pachokwadi.
Vhura moyo - Elvira Lindo
Mutori wenhau uye munyori anobva kuCádiz anopa iyi nyaya zvichibva pa episode yakaitika muMadrid muna 1939. Protagonist yaro inotiudza hukama hwakadzama hwaive nevabereki vavo, nehunhu hwake hwakanyanya uye husina kusimba pane hwake hwaitaridza hupenyu hwemhuri yese. Iyo inoverengeka zvakare inoteedzera hupenyu hwenyika ino mukati mezana ramakore rekuchinja kukuru kukuru uye zvakare iri mutero kuchizvarwa, uyo akasara kuno kuSpain mu nguva yapashure pehondo akaisa pfungwa pakupona.
Iye mukomana ane reels - Pere Cervantes
Pere Cervantes anopa ino nyowani nyowani yakaiswa mu Barcelona 1945. Iyo protagonist, Nil roig, mwana uyo, newake bhasikoro, yakatsaurirwa kutakura kubva kune imwe cinema kuenda kune imwe mahara coils yemafirimu. Asi zuva iro inosangana Makore gumi nematatu ekuberekwa anopara mhosva Iyo inosungirwa pasuo reimba yake. Mhondi inotiza mushure mekumutyisidzira nerufu kana akataura chimwe chinhu, uye panguva imwechete iyo kufa nyajambwa anokupa iwe misterioso chrome yemufirimu mutambi wenguva. Chinhu chinoteverwa uye kushuiwa na aimbova mutungamiriri weGestapo uye mupurisa asina hunhu. Asi chokwadi chinotungamira Nil kuyedza kutsvaga zviri kuitika ndechekuti iye munhu ari kufa taura nababa vako kare kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 5 nhau dzaKurume. Nhema nhema, nhoroondo, chinyorwa ...